ဟာသ Archives - Nainglinn
ဟာသ June 16, 2022
မစိတျမှနျနတေဲ့ လူပြို ကွီးနှငျ့ ဖဘေု့တျအှနျလိုငျးဖူးစာ ဂဈတာရှိတျမမ တို့တှကွေ့သောအခါ
မစိတျမှနျနတေဲ့ လူပြိုကွီးနှငျ့ ဖဘေု့တျအှနျလိုငျးဖူးစာ ဂဈတာရှိတျမမ တို့တှကွေ့သောအခါ “ကြှနျတေျာ့ကိုဖမျးကွပါ… ကြှနျတေျာ့ကို မွနျမွနျဖမျးပေးကွပါ အီးအဟီးဟီး…” လူပြိုကွီးဦးတိုး ရဲစခနျးထဲကို ငိုကွီးခကျြမနဲ့ ပွေးဝငျသှားတယျ။ တာဝနျကရြဲအရာရှိက- “ကဲ ထိုငျပါ… တဈကိုယျလုံးလညျး ဒဏျရာတှနေဲ့ မွငျမကောငျးပါလား?… ဘယျလိုဖွဈလာတာလဲ?… ဘာကိစ်စကွောငျ့ဖမျးရမှာလဲဆိုတာပွောပါဦး” “ဒီလိုပါ ဦးရဲကွီးရယျ… ကြှနျတျောနဲ့ အှနျလိုငျးမှာခဈြကွိုကျနတေဲ့ကောငျမလေးကို အခုတညျးခိုခနျးမှာခြိနျးတှပွေီ့းမှ ဒီအတိုငျးထားပဈခဲ့ပါတယျ… ကြှနျတေျာ့မှာအပွဈရှိပါတယျ… ကြှနျတေျာ့ကိုဖမျးပါဗြာ” “ဟာကှာ ခငျဗြားမို့လို့ နှမခငျြးမစာမနာလုပျရကျတယျ… ကောငျးပွီလေ ဒါဆိုရငျတော့ပွဈမှုမွောကျသှားပွီ… ဖမျးရမှာပေါ့။…
ဟာသ March 5, 2022
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း
အိမ်ရှင် ကျောင်းဆရာမရဲ့ ယောက်ျား နှင့် ရုပ်ချောလှတဲ့ အိမ်ဖော်မ ဇာတ်လမ်း မိန်းမ ဖြစ်သူက ကျောင်းဆရာမ ဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာ နယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာ ယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးက မရှိ စားဖို့ သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ကပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော် နဲ့ အိမ်သန့်ရှင်းရေး က ပြသနာရှိလာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူကအိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာ မြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက်အိမ်ကို ပြန်ရောက် လာသော အခါ…
သားညကရြငျ ပှဲကွမျးဖို့ဝယျထားတဲ့ ခှေးလြားနကျစတှေ့ကေို ယောက်ခထီးကွီးက အကုနျကွိတျလိုကျသောအခါ…
သားညကရြငျ ပှဲကွမျးဖို့ဝယျထားတဲ့ ခှေးလြားနကျစတှေ့ကေို ယောက်ခထီးကွီးက အကုနျကွိတျလိုကျသောအခါ သားမကျက ညကရြငျ ပှဲကွမျးဖို့ ဝယျထားတဲ့ ခှေးလြားနကျစတှေ့ေ ကို ယောက်ခထီးကွီးက အကုနျကွိတျလိုကျသောအခါ ကြား အားတိုးဆေးထဲမာခှေးလြားနကျစအေ့ကွောငျး သိကွမယျထငျပါတယျ ” မကွငျမွ..” ” ဘာတုနျးကိုဆောငျး ” ” ငါ့ ခှေးလှေးယားသီး အနကျစတှေ့ေ ဘယျမတုနျး” ” ဟငျ…..ကြုပျလညျး ဘယျသိမတုနျး ၊ တျောက ဘယျမှာထားလို့လဲ ” ” ကွောငျအိမျပျေါ…
၂၃ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရလို့ အမေဖြစ်သူက ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ဟုပြောပီး ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါ
၂၃ နှစ်အရွယ်သမီးလေး ကိုယ်ဝန်ရလို့ အမေဖြစ်သူက ကောင်လေးကို ဖုန်းဆက်ဟုပြောပီး ဖုန်းဆက်လိုက်သောအခါ သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး ကိုယ်ဝန်ရလာတယ် အမေ လုပ်သူဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ ကောင်မအဲ့ဒါ ဘယ်နွားလက်ချက်လဲ အခု ဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။ နာရီဝက်လောက်ကြာတော့သူတို့အိမ်ရှေ့ကို Rolls Royce တစ်စီး ဆိုက်လာတယ်။ သားသားနားနား ဝတ်စားထားတဲ့ အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ် သူ ပြောတယ် မရည်ရွယ်ပဲ ကိုယ်ဝန်ရသွားတာ…
ရငျသားသေး လို့ စိတျမကောငျးမဖွဈပါနဲ့ (ယောကငြ်ျားလေးမြား မဖတျရနျ)…
မိန်းကလေးတွေအတွက် ရင်သားအလှဟာ အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တာ ယောင်္ကျားတွေအတွက်လား။ အဲဒီလိုတွေးလို့လဲ မရပြန်ပါ။ မိန်းကလေးတစ်ယောက်အတွက် မိန်းကလေး ပီသတယ်ဆိုတာကို ဖော်ကြုးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်း မမှားပါ။ ဒါပင်မဲ့ အခြေအနေ အမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ့်ရဲ့ ရင်သားကသေးခဲ့ရင်ကောင်း ကောင်းချက်တွေရှိပါတယ် ★ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့စကားပြောနေချိန်မှာ သူတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေကို ဂရုစိုက်စရာမလိုပါ။ ★ ကားစီးတဲ့အခါ ခါးပတ်ပတ်ရင်လည်း သာသာယာယာပါပဲ။ ★ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အတွင်းခံလေးတွေကို ကြိုက်တာရွေးနိုင်တယ်။ ★ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူလေးက လိမ္မာတဲ့ကလေးလို့ အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ★…
2022 အတှကျ သင်ျကွနျစာ ထှကျပျေါလာပါပွီ အရမျးကောငျးပါတယျ (ဖတျဖွဈအောငျဖတျလိုကျပါ)
2022 အတှကျ သင်ျကွနျစာ ထှကျပျေါလာပါပွီ အရမျးကောငျးပါတယျ (ဖတျဖွဈအောငျဖတျလိုကျပါ) ဤနှဈတှငျ သိကွားမငျးသညျ ဘီလူးကိုစီး၍ လကျယာဘကျတှငျ သံလကျြကိုငျလြှကျ လကျဝဲဘကျတှငျ ရဖေလားကိုငျကာ လူ့ပွညျသို့ ဆငျးအံ့။ နှဈစဉျ အဖျောအဖွဈလိုကျပါလာတတျသော မာဒလိနတျသားသညျ ဤနှဈတှငျ လူ့ပွညျသို့အစောကွီးရောကျနအေံ့။ ထို့ကွောငျ သင်ျကွနျရကျအတှငျး မိုးရှာလြှငျ ရပေါအံ့။ ငလငျြလှုပျလြှငျမွတေုနျအံ့။ မုနျတိုငျးတိုကျလြှငျ အခွမေခိုငျသော သဈပငျမြား ကြိုးကအြံ့။ တနင်ျဂနှသေားသမီးမြားအနဖွေငျ့ သင်ျကွနျရကျအတှငျးရကေစားထှကျလြှငျ အဝတျအစားမြား စိုအံ့။ တနင်ျလာသားသမီးမြား ခိုးရာနောကျ…
ဘဝအမောတှေ ခဏပွပြေောကျဖို့ သို့ / ခဈြရပါသော အမေ နဲ့ အဖေ သမီး ခိုးရာနောကျ လိုကျသှားပါပွီ။ သမီးကို အဖနေဲ့အမတေို့ ပွုစုနရေမှာ ရှကျပွီတော့ အားနာလာလို့ပါ။ အမတေို့ ဆငျပေးထားတဲ့ လကျစှပျ ဆှဲကွှိုး လကျကောကျ တှကေို မယူခငျြလို့ အိတျနဲ့ထညျ့ပွီး သမီးမှနျတငျခုံပျေါမှာတငျထားပွီးမှ သမီးတို့ စားဝတျနရေေး အဆငျမပွရေငျ အမတေို့ပဲ့ စိတျဆငျးရဲမှာ စိုးလို့ သမီးအကုနျယူသှားပါပွီ။ ATM card လေးလညျး…
ဟာသ February 14, 2022
ယောက်ျားလေးတစ်ယောက် လူပျိုစစ် ၊မစစ်ကို ဒီအချက်တွေကနေ သိရှိသွားနိုင်ပါတယ်…
အမျိုးသားအားလုံးလိုလိုဟာ လူပျိုဘဝကို အစောကြီး ဆုံးရှုံးတတ်ကြတယ်လို့ အများစုက ယူဆကြသည့်တိုင် အသက် ၂၅၊ ၃၀ ထိတောင် ဖိုမကိစ္စမစမ်းသပ်ဖူးတဲ့ အမျိုးသားတချို့ရှိနေတယ် ဆိုတာပါပဲ သူတို့လည်း သူ့အကြောင်းပြချက်နဲ့သူ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ကိုယ်ဒိတ်လုပ်တဲ့ ကောင်လေးဟာ လူပျိုစစ်မစစ် သိချင်တယ်ဆိုရင် ခန့်မှန်းသိရှိနိုင်မယ့် လက္ခဏာရပ်တချို့ရှိပါတယ်။ တခါတရံ ခန့်မှန်းချက်တွေ လွဲကောင်းလွဲပါလိမ့်မယ်။ လူပျိုစစ်မစစ် သူသာအသိဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သိချင်စိတ်ပြင်းပြနေသေးတယ်ဆိုရင် လူပျိုစစ်စစ်တွေ ပြုမူတတ်တဲ့ ကိုယ်အမူအရာတချို့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လူပျိုစစ်စစ်ဖြစ်တယ်၊…
ဟာသ February 9, 2022
ခိုးရာလိုကျသှားတဲ့သမီးဖွဈသူရဲ့ စာကိုဖကျပီး အူပါတကျတယျ
ဟာသ February 5, 2022
ဘယျမှာမှ မရတဲ့ အငျတာနကျဈေးတှေ (ဂငျြးမဟုပါ)
ဘယျမှာမှ မရတဲ့ အငျတာနကျဈေးတှေ (ဂငျြးမဟုပါ) 500MB ကို (၂၅၀)ကပျြ 1 Gb ကို (၅၀၀)ကပျြ 30 Days 2Gb ကို (၁၀၀၀)ကပျြ 30 Days 5Gb ကို (၂၀၀၀) ကပျြ 30 Days 8Gb ကို (၃၀၀၀) ကပျြ 30 Days 10Gb ကို (၅၀၀၀) ကပျြ 30…
NAINGLINN provide celebrity, life style,breaking news, local news and International news.Articles are displayed in tex,video and photos.Vistors can read news in articles type of categories in https://nainglinn.com/ (example - News, Entertainment,Sport, Health, Celebrity, Media &Music …etc). Hope our vistors enjoy our website.
ခေါငျးလြှျောပွီးခါစမှာ အိပျယာပျေါလှဲအိပျတတျတဲ့ ပြိုမလေေးတှသေတိထားသငျ့တဲ့ အန်တရာယျ
Facebook Cele ချိုမာ နှင့် သူမချစ်သူတို့အား ဟန်ငြိမ်းဦး စေခိုင်းမှုကြောင့် ဖမ်းဆီးခံရ
ကလေးတွေကို ချစ်ရင် အောက်ပါအကျင့်(၃)ခုကို ဖျောက်ပေးပါ
ဝဒေနာခံစားနရေတဲ့ ဖခငျဖွဈသူ ကို ကြောကျကပျတဈခွမျး ပေးလှူပွီး ကြှေးကြေးဇူးဆပျခဲ့တဲ့ သရုပျဆောငျ စဈမငျးထကျ
ပိုင်တံခွန် ပြောပြလာတဲ့ ” ခွင့်လွှတ်ခြင်း ” ဆိုတာ ..